Mayelana NATHI | Shandong Dingtaisheng Imishini Technology Co., Ltd.
I-DTS izinze eChina, eyandulelayo yasungulwa ngo-2001. I-DTS ingomunye wabahlinzeki abanethonya elikhulu embonini yokukhiqiza inzalo yokudla nesiphuzo e-Asia.
Ngo-2010, inkampani yashintsha igama layo laba yi-DTS. Le nkampani ihlanganisa indawo ephelele yamamitha skwele ayizigidi eziyi-1.7 futhi, ikomkhulu liseZhucheng, esifundazweni saseShandong, inabasebenzi abangu-160. I-DTS ibhizinisi lobuchwepheshe elihlanganisa ukunikezwa kwempahla eluhlaza, umkhiqizo we-R & D, ukwakheka kwenqubo, ukukhiqiza nokukhiqiza, ukuhlolwa komkhiqizo okuphelile, ukuthuthwa kwezobunjiniyela kanye nensizakalo yokuthengisa ngemuva
Le nkampani ine-CE, EAC, ASME, DOSH, MOM, KEA, SABER, CRN, CSA kanye nezinye izitifiketi zomhlaba wonke. Imikhiqizo ye-It`s ithengiswe emazweni angaphezu kuka-35 nezifunda, kanti i-DTS inezisebenzi kanye nehhovisi lokuthengisa e-Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Arabia, Myanmar, Vietnam, Syria, njll. , I-DTS inqobile ukwethenjwa kwamakhasimende futhi igcina ubudlelwane obuzinzile bokuphakelwa kanye nokufunwa okungaphezu kwezimpawu eziyi-130 ezaziwayo zasekhaya nakwamanye amazwe.
Design Futhi Ukwakha
Ukuze sibe ngumkhiqizo ohamba phambili embonini yokuvala inzalo yokudla nesiphuzo emhlabeni wonke umgomo wabantu be-DTS, sinabanjiniyela abanolwazi nabanekhono, onjiniyela bokuqamba kanye nonjiniyela bokuthuthukisa isoftware kagesi, kuyinjongo yethu nomthwalo wethu ukuhlinzeka amakhasimende ethu ngemikhiqizo ehamba phambili , izinsizakalo nemvelo yokusebenza. Siyakuthanda esikwenzayo, futhi siyazi ukuthi inani lethu lilele ekusizeni amakhasimende ethu ukudala inani. Ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ahlukene, siyaqhubeka nokuqamba, ukuthuthukisa nokwakha izixazululo eziguquguqukayo zamakhasimende.
Sineqembu lobuchwepheshe eliqhutshwa inkolelo efanayo futhi lihlala lifunda futhi lisungula izinto ezintsha. Isipiliyoni secebo lethu eliqongelelwe, ukusebenza ngokucophelela nomoya omuhle kunqoba ukwethenjwa kwamakhasimende amaningi, futhi futhi kungumphumela wabaholi abakwazi ukuqonda, ukubikezela, ukushayela izidingo zemakethe ngezinhlelo futhi basebenze nethimba ukuhola emisha.
I-DTS izinikele ekuhlinzekeni amakhasimende ngemishini esezingeni eliphakeme kakhulu, siyazi ukuthi ngaphandle kokusekelwa okuhle kwezobuchwepheshe, noma inkinga encane ingadala ukuthi ulayini wokukhiqiza othomathikhi uyeke ukusebenza. Ngakho-ke, singaphendula ngokushesha futhi sixazulule izinkinga lapho sinikeza amakhasimende izinsizakalo zangaphambi kokuthengisa, ukuthengisa nangemva kokuthengisa. Kungakho futhi i-DTS ingahlala ngokuqinile isabelo esikhulu semakethe eChina futhi iqhubeke nokukhula.
Sicela uzizwe ukhululekile ukusithumela izidingo zakho futhi sizokuphendula ngokushesha.
Sineqembu lobuchwepheshe lobunjiniyela elizokusebenzela cishe zonke izidingo ezinemininingwane.
Amasampula angenazindleko angathunyelwa kuwe uqobo ukuze uqonde imininingwane engaphezulu.
Ngomzamo wokuhlangabezana nezidingo zakho, sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi.
Ungasithumela ama-imeyili futhi uxhumane nathi ngqo.
Ngaphezu kwalokho, siyakwamukela ukuvakashelwa embonini yethu evela emhlabeni wonke ukuthola kangcono kakhulu inhlangano yethu.
Sihambisana neklayenti 1, ikhwalithi ephezulu yokuqala, intuthuko eqhubekayo, inzuzo yomunye nomunye kanye nezimiso zokuwina. Lapho ukubambisana ndawonye nekhasimende, sinikeza abathengi ngensizakalo esezingeni eliphakeme kakhulu.